Real Madrid oo iska iibineysa ciyaaryahan caan ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Real Madrid oo iska iibineysa ciyaaryahan caan ah
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay Tottenham Hotspur fursad siiso oo ay dib ula soo saxiixato Luka Modric.
Inkasta oo Modric uu bilaabay ololihiisii siddeedaad ee garoonka Bernabeu tan iyo markii uu ka dhaqaaqay Spurs, xiddiga heerka caalami ee dalka Croatia ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu baxayo ilaa xagaagii hore.
Marka loo eego xiisaha ay u qabaan Christian Eriksen, Los Blancos ayaa ku faraxsan inay u ogolaadaan 33 jirkaan inuu ku laabto Waqooyiga London si uu qeyb kaga noqdo heshiiska.
Si kastaba ha noqotee, Spurs ayaa haatan si fiican ugu keydsan xulashooyinka dhexda garoonka dhexdiisa, taasoo suurtagal ka dhigeysa inay soo dirto wax kasta oo ku lug leh halyeeyadii aan laga fileynin marxaladdaan.
Sikastaba, iyadoo wax ka yar hal sano ay uga harsan tahay qandaraaska Eriksen, kooxda ka ciyaarta Premier League ayaa isha ku heysa inay hubiso inaysan lumin mid ka mid ah ciyaartoydooda ugu muhimsan heshiis xor ah dhamaadka xilli ciyaareedka.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay tixgelin siineyso Mariano Diaz si uu ugu biiro koox kasta oo uu doonayo.
Weeraryahankan ayaa ku soo laabtay Bernabeu xagaagii 2018 isaga oo dhaliyay 21 gool 48 kulan oo uu u ciyaaray kooxda reer France ee Lyon intii lagu jiray waayihi cajiibka ahaa.
Mariano ayaa kaliya afar gool dhaliyay 19 kulan oo uu u saftay Los Blancos intii lagu gudajiray ololaha 2018-19, si kastaba ha ahaatee, hal kulan kama uusan soo muuqan kooxda Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan.
Sida laga soo xigtay Marca, Madrid ayaa isha ku heysa inay xiddigii hore ee Dominican Republic inuu ku dhaqaaqdo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo si ay ugu fududaato soogalootiga ciyaartooy cusub.
Mariano ayaa goolal muhiim ah u dhaliyay labada Real Madrid C iyo Real Madrid B ka hor inta uusan ku soo biirin kooxda koowaad, inkastoo weeraryahanka uu dhaliyay kaliya sagaal gool 33 kulan uu u saftay kooxda waa weyn.
Espanyol iyo Valencia ayaa labadaba xiiseynayay intii lagu jiray suuqa kala iibsiga xagaaga.
Previous articleTima jarashada Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo lagu qoslay
Next articleShir ka furmaayo Baydhabo & wafdi gaaray
Dhageyso;-Wasiir Khadiijo oo shaacisey arrin uga baaqatay Cabsida COVID-19